Ny fanaovana dokambarotra niomerika dia mety ho ny fandaniana amin'ny fanaovana dokambarotra avo indrindra amin'ny 2016 araka ny comScore. Izany koa no mahatonga azy io ho lasibatra tsy hay tohaina ho an'ny hosoka amin'ny tsindry. Raha ny marina, araka ny tatitra vaovao momba ny hosoka amin'ny indostrian'ny dokambarotra an-tserasera, ny ampahatelon'ny fandaniana amin'ny doka rehetra dia ho very amin'ny fisolokiana. Distil Networks sy ny Bureau Interactive Advertising Bureau (IAB) dia namoaka ny Torolàlana ho an'ny Digital Publisher momba ny fandrefesana sy ny fanalefahana ny fifamoivoizana Bot, tatitra iray izay manadihady anio
Google mandefa ny Google Tag Manager
Talata, Oktobra 2, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Raha efa niasa tamina tranokala mpanjifa ianao ary tsy maintsy nanampy kaody fiovam-po avy amin'ny Adwords ho lasa maodely fa rehefa naseho tamin'ny mason-tsivana sasany io modely io dia fantatrao ny aretin'andin'ny pejin'ny tagging! Ny tag dia sombin-kaody bitika kely amin'ny tranokala izay afaka manampy amin'ny fanomezana fomba fijery mahasoa, fa mety hiteraka fanamby ihany koa. Ny tags marobe dia mety hahatonga ny tranokala hiadana sy ho malemy paika; ny tags tsy diso dia mety manodinkodina ny fandrefesanao; ary mety ho izany
Karatra Business Wordle!
Alakamisy, Jolay 31, 2008 Zoma, Jona 19, 2015 Douglas Karr
Nanafika ny tontolon'ny bilaogy i Wordle, herinandro vitsivitsy lasa izay ary ny bilaogera dia nidradradradra! Wordle dia fampiharana Java izay manova ny cloud tag anao ho zavatra kanto. Noheveriko fa mahafinaritra i Wordle, saingy tsy voatery hitoky amin'ny bilaogy aho. Androany aho dia naka hevitra amin'ny Sharpminds. Ny iray tamin'ireo olona tao amin'ny fivoriana, Linda Watts, dia nanolotra ny karany ary avy hatrany dia nitsiky ny tarehiko! I Linda dia nanana fitambarana iray manontolo (ary koa ny sasany